Diyaarado dagaal oo duqeyn ka geystay duleedka Hargeysa | Berberanews.com
Home WARARKA Diyaarado dagaal oo duqeyn ka geystay duleedka Hargeysa
Diyaarado dagaal oo duqeyn ka geystay duleedka Hargeysa
Hargeysa (Berberanews):- Diyaarado aan la aqoonsan cidda leh iyo ujeeddada ay u socdeen toona, ayaa shalay duqeymo ka geystay deegaanno hoos yimaadda Degmada Sallaxley ee gobolka Maroodi-jeex, kuwaas oo banbooyin holcaya ku tuuray dad reer guuraa ah oo deggen cidhifka banka qool-caday oo ka tirsan degmada Sallaxlay oo qiyaastii 50 km u jirta Hargeysa.
Guddoomiyaha Degmada Sallaxley Ismaaciil Yuusuf Xuseen (Shiine), ayaa u sheegay warbaahinta HCTV, in diyaarado dagaal oo joog hoose ku duulayaa ay waxyaabo qarxa ku tuureen jees reer guuraa ah iyo dhul daaqsimeed ka tirsan degmada.
“Diyaaraduhu waxay ka yimaadeen dhinaca koonfureed iyagoo joog hoose ku duulaya ayay waxyaabo qaraxa ku tuureen dad reer miyi ah oo degan meel u dhaxaysa Salaxley iyo deegaanka Aaden Abokor. Ma jiro wax dhimasho ah ama dhaawac ah oo dadka soo gaadhay, balse dab xoogan oo hubkaasi sababay ayaa gubay jabadkii reerku degenaayeen” ayuu yidhi Gudoomiye Shiine.
Guddoomiyaha degamada Sallaxlay waxaa uu sheegay inay goobtaasi ay tageen isla markaana ay soo arkeen hadhaaga hubkii ay diyaaraduhu tuureen iyo gubashada dhulkii ay ku habsadeen bambooyinku.
Previous articleCaasimadda Hargeysa: Hoyga madadaalada iyo habeennada Qaaciga
Next articleKim: Wadahadallo furan ayaan diyaar u ahay haddii ‘Mareykanka uu wax beddelo qaabka wadahadalka’
Guddoomiyaha Maxkamadda sare ee Somaliland oo la kulmay safiirka Ingiriiska ee Somalia